Ọnụ Ọgụgụ 16 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ọnụ Ọgụgụ 16:1-50
16 Kora+ nwa Izha,+ nwa Kohat,+ nwa Livaị,+ wee bilie, ya na Detan+ na Abaịram+ bụ́ ụmụ Elayab,+ tinyere Ọn nwa Pilet, ụmụ Ruben.+ 2 Ha wee bilie n’ihu Mozis, ha na narị ndị ikom abụọ na iri ise n’ime ụmụ Izrel, bụ́ ndị isi nke nzukọ ahụ, ndị a na-akpọ òkù ịbịa nzukọ, ndị a ma ama. 3 Ha wee zukọta imegide+ Mozis na Erọn, sị ha: “O zuworo unu, n’ihi na nzukọ a dum dị nsọ,+ Jehova nọkwa n’etiti ha.+ Gịnịzi mere unu ji na-ebuli onwe unu elu karịa ọgbakọ Jehova?”+ 4 Ozugbo Mozis nụrụ ya, o gburu ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala. 5 O wee gwa Kora na ndị niile ya na ha zukọtara, sị: “N’ụtụtụ, Jehova ga-eme ka a mara onye bụ́ nke ya+ na onye dị nsọ+ na onye ga na-abịa ya nso,+ onye ọ bụla ọ họọrọ+ ga na-abịa ya nso. 6 Meenụ nke a: Werenụ ihe ịgụ ọkụ,+ Kora na ndị niile ya na ha zukọtara,+ 7 echi tinyenụ ọkụ n’ime ha ma tụkwasị ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n’elu ha n’ihu Jehova, ọ ga-erukwa na onye Jehova ga-ahọrọ,+ ọ bụ ya bụ onye dị nsọ. O zuworo unu, unu ụmụ Livaị!”+ 8 Mozis wee gaa n’ihu ịsị Kora: “Biko, geenụ ntị, unu ụmụ Livaị. 9 Ọ̀ bụụrụ unu ntakịrị ihe na Chineke Izrel si ná nzukọ Izrel kewapụta+ unu iji chee unu n’ihu onwe ya ka unu wee na-eje ozi metụtara ụlọikwuu Jehova nakwa ka unu na-eguzo n’ihu nzukọ a na-ejere ha ozi,+ 10 ọ̀ bụkwa obere ihe na ọ kpọtara gị na ụmụnne gị bụ́ ụmụ Livaị nso? Ùnu na-achọkwu inweta ọrụ ndị nchụàjà?+ 11 N’ihi ya, gị na ndị niile gị na ha zukọtara na-emegide Jehova.+ Ma ònye ka Erọn bụ mere unu ga-eji na-atamu ntamu megide ya?”+ 12 E mesịa, Mozis ziri ozi ka a kpọọ Detan na Abaịram+ bụ́ ụmụ Elayab, ma ha sịrị: “Anyị agaghị abịa!+ 13 Ọ̀ bụ ntakịrị ihe na i si n’ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru kpọpụta anyị ka i gbuo anyị n’ala ịkpa a,+ mere i jikwa na-anwa ime onwe gị onyeisi anyị gabiga ókè?+ 14 Ka ọ dị ugbu a, ị kpọbabeghị anyị n’ala ọ bụla nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru na ya,+ ka i wee nye anyị ala na ubi vaịn. Ọ̀ bụ anya ndị ikom ahụ ka ị chọrọ ịghụpụta? Anyị agaghị abịa!” 15 Mozis wee wee oké iwe, o wee sị Jehova: “Atụgharịla lee àjà ọka*+ ha anya. Ọ dịghị otu oké ịnyịnya ibu m naara ha, emejọghịkwa m otu n’ime ha.”+ 16 Mozis wee gwa Kora,+ sị: “Gị na ndị gị na ha zukọtara, bịanụ n’ihu Jehova+ echi, gị na ha na Erọn. 17 Onye ọ bụla were ihe ịgụ ọkụ ya, unu ga-atụkwasịkwa ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n’elu ha, onye ọ bụla ga-eche ihe ịgụ ọkụ ya n’ihu Jehova, narị ihe ịgụ ọkụ abụọ na iri ise, gị na Erọn, onye ọ bụla jiri ihe ịgụ ọkụ ya.” 18 Onye ọ bụla n’ime ha wee were ihe ịgụ ọkụ ya tinye ọkụ n’ime ya, tụkwasịkwa ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n’elu ya wee guzo n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute, ha na Mozis na Erọn. 19 Mgbe Kora kpọkọtara nzukọ+ ahụ dum imegide ha n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute, ebube Jehova pụtara ìhè n’ihu nzukọ ahụ dum.+ 20 Jehova wee gwa Mozis na Erọn okwu, sị: 21 “Sinụ n’etiti nzukọ a pụọ+ ka m kpochapụ+ ha n’otu ntabi anya.” 22 Ha wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala wee sị: “Biko, Chineke, Chineke nke mmụọ nke ụdị anụ ahụ́ ọ bụla,+ naanị otu onye ọ̀ ga-emehie, i wee weso nzukọ a dum iwe?”+ 23 Jehova wee sị Mozis: 24 “Gwa nzukọ ahụ, sị: ‘Sinụ na gburugburu ụlọikwuu Kora, Detan na Abaịram pụọ!’”+ 25 E mesịa, Mozis biliri gakwuru Detan na Abaịram, ndị okenye+ Izrel sokwa ya gaa. 26 O wee gwa nzukọ ahụ, sị: “Biko, sinụ n’ihu ụlọikwuu ndị ajọ omume a pụọ, unu emetụkwala ihe ọ bụla bụ́ nke ha aka,+ ka e wee ghara ikpochapụ unu n’ihi mmehie ha niile.” 27 Ha wee si n’ihu ụlọikwuu Kora, Detan na Abaịram pụọ ozugbo, Detan na Abaịram wee pụta, guzo n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu ha,+ tinyere ndị nwunye ha, ụmụ ha ndị ikom na ụmụntakịrị ha. 28 Mozis wee sị: “Unu ga-eji nke a mara na Jehova ezitewo m ịrụ ọrụ a niile,+ na ọ bụghị m chepụtara ya:+ 29 Ọ bụrụ na ọ bụ otú mmadụ niile si anwụ ka ndị a ga-esi nwụọ, ọ bụrụkwa na ọ bụ ụdị ntaramahụhụ mmadụ niile na-ata ka a ga-enye ha,+ maranụ na ọ bụghị Jehova zitere m.+ 30 Ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọhụrụ ka Jehova ga-eke,+ o wee bụrụ na ala ga-emeghe ọnụ ya loo ha+ na ihe niile bụ́ nke ha, ha onwe ha ewee gbadaruo Shiol ná ndụ,+ unu ga-amara n’ezie na ndị ikom a elelịwo Jehova.”+ 31 O wee ruo na ozugbo o kwuchara ihe a niile, ala ha zọkwasịrị ụkwụ malitere imeghe.+ 32 Ala wee meghee ọnụ loo ha na ezinụlọ ha na mmadụ niile Kora nwere na ngwongwo ha niile.+ 33 Ha na ndị niile bụ́ nke ha wee gbadaruo Shiol ná ndụ, ájá wee kpuchie ha,+ ha wee laa n’iyi n’etiti ọgbakọ ahụ.+ 34 Ndị Izrel niile gbara ha gburugburu wee gbaa ọsọ mgbe ha nụrụ mkpu ha, n’ihi na ha malitere ịsị: “Anyị na-atụ egwu na ala nwere ike ilo anyị!”+ 35 Ọkụ wee si n’ebe Jehova nọ pụta+ rechapụ narị ndị ikom abụọ na iri ise ahụ, bụ́ ndị nọ na-esure ihe nsure ọkụ ahụ na-esi ísì ụtọ.+ 36 Jehova wee gwa Mozis, sị: 37 “Gwa Elieza nwa Erọn onye nchụàjà ka o wepụtasịa ihe ịgụ ọkụ+ ndị ahụ n’ọkụ ahụ, sị ya, ‘Kposasịa ọkụ ha n’ebe ahụ; n’ihi na ha dị nsọ, 38 ya bụ, ihe ịgụ ọkụ nke ndị ikom a bụ́ ndị mehiere mkpụrụ obi ha.+ A ga-ewere ha rụọ mbadamba ọla ndị dị fere fere a ga-eji machie ebe ịchụàjà ahụ,+ n’ihi na e ji ha bịa n’ihu Jehova, nke mere ha ji dị nsọ; ha ga-abụrụ ụmụ Izrel ihe àmà.’”+ 39 Elieza onye nchụàjà wee were ihe ịgụ ọkụ+ ndị ahụ e ji ọla kọpa mee, nke ndị ahụ ọkụ regburu wetara, e wee tisaa ha ka ha bụrụ ihe a ga-eji machie ebe ịchụàjà ahụ, 40 ka ha bụụrụ ụmụ Izrel ihe ncheta, na onye ọzọ+ na-abụghị nwa Erọn agaghị abịa nso isure ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n’ihu Jehova,+ ọ dịghịkwa onye ga-adị ka Kora na ndị ya na ha zukọtara,+ dị nnọọ ka Jehova gwara ya site n’ọnụ Mozis. 41 N’echi ya, nzukọ ụmụ Izrel dum malitere ịtamu ntamu megide Mozis na Erọn,+ sị: “Unu egbuwo ndị Jehova.” 42 O wee ruo na mgbe nzukọ ahụ zukọtara megide Mozis na Erọn, ha tụgharịrị chee ụlọikwuu nzute ihu; ma, lee! ígwé ojii kpuchiri ya, ebube Jehova wee pụta ìhè.+ 43 Mozis na Erọn wee bịa n’ihu ụlọikwuu nzute.+ 44 Jehova wee gwa Mozis, sị: 45 “Sinụ n’etiti nzukọ a pụọ, ka m kpochapụ ha n’otu ntabi anya.”+ Ha wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala.+ 46 E mesịa, Mozis gwara Erọn, sị: “Were ihe ịgụ ọkụ gụta ọkụ n’ebe ịchụàjà ahụ,+ tinyekwa ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ na ya ma gakwuru nzukọ ahụ ọsọ ọsọ kpuchie mmehie ha,+ n’ihi na iwe eweela Jehova.+ Ihe otiti amalitewo!” 47 Erọn wee were ya ozugbo, dị nnọọ ka Mozis kwuru, gbaba n’etiti ọgbakọ ahụ; ma, lee! ihe otiti amalitewo n’etiti ndị Izrel. O wee mụnye ihe nsure ọkụ ahụ na-esi ísì ụtọ wee malite ikpuchiri ha mmehie ha. 48 O wee kwụrụ n’agbata ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ.+ E mesịa, ihe otiti ahụ kwụsịrị.+ 49 Ndị nwụrụ n’ihe otiti ahụ dị puku iri na anọ na narị asaa, ma e wezụga ndị nwụrụ n’ihi Kora. 50 N’ikpeazụ, mgbe Erọn laghachikwuuru Mozis n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute, ihe otiti ahụ akwụsịwo.
Ọnụ Ọgụgụ 16